Ukuzivocavoca emva kweBarbell-Eyona nto unokuyenza | IBezzia
USusana godoy | 12/10/2021 16:00 | Ukuzivocavoca
Kungenxa yokuba zininzi iindlela zokuzilolonga ekufuneka sikwazi ukuzilolongela umzimba wethu kwaye siyayazi. Kodwa kule meko sithetha ngayo Eyona nto ibhetele yokwenza umthambo. Kungenxa yokuba ukwangomnye wamadlelane amakhulu ukusinceda kwintshukumo nganye, ukuze sifumane iziphumo ezilungileyo.
Kodwa ukuba awukaqiniseki ukuba ungaqala ngaphi, lixesha lokuba uzivumele uqhutywe zezinye zeembono esikubonisa zona. Khumbula ukuba eyona nto intle kukuba kongeza ezinye iirekhodi, kodwa uhlala uxhomekeke kwiimfuno zakho kwaye uhambe kancinci kancinci ngokobunzima, kuba kuya kubakho ixesha lokongeza.
1 Ukufa kukaBarbell
2 Umqolo kaBarbell
3 Ukucofa kwamagxa
4 I squat yangaphambili 'squat yangaphambili'
5 Ukutsala: Enye yezona zinto zilungileyo ze-barbell back
Esinye sezona ziseko zibalulekileyo xa kusenziwa kweyona nto ibhetele yokwenza umthambo. Ukongeza ekubeni yenye yezona zaziwa kakhulu kwaye kukuba ungasebenzisa i-dumbbells. Kodwa kule meko sishiywe kukhetho lokuqala olusonwabisa ngakumbi. Zombini umva kunye nomzimba ongezantsi ziyaxhamla ngombono onje. Kuba iya kuphucula imeko yokuma ukongeza ekomelezeni umva ongezantsi. Kwimithambo nganye uya kugxila ekuphefumlweni kwaye ngenxa yoko, ukujikeleza kuya kuphucula. Olunye uluvo olukhulu, xa sinokuthi sithandabuze!
Enye yokubheja okukhulu kwaye siyazi ukuba uyayithanda, kuba ngokuqinisekileyo unayo ngaphezulu kokudityaniswa kukuhamba ngebhanti. Ngesikhundla esichanekileyo kuphunyezo ngalunye, kufuneka kuthiwe usebenza ngaphezulu kunokuba ucinga ngokuba umsebenzi uza kuhamba ukusuka emqolo ukuya kwi-trapezius okanye i-rhomboids kunye nendawo ye-pectoral. Ke sijamelene nomsebenzi opheleleyo kwaye uyimfuneko. Ewe, uzisa ibha kufutshane nepectoral, ke umsebenzi ugxile kwi-latissimus dorsi kunye ne-trapezius.
Kuyinyani ukuba zininzi iindlela zokwenza umthambo onje. Kodwa sishiywe yenye yezona zilula, nangona kusengqiqweni uya kuba nakho ukuziqhelanisa neemfuno zakho. Ukuba ufuna ukomeleza izihlunu kule ndawo, awunakuphoswa. Ke kufuneka sisoloko siyazisa kulungelelwaniso lwethu. Ukwenza oku, unokukwenza ngee-dumbbells okanye nge-bar kwaye uya kuziphakamisa ukuqala kwindawo egxalabeni.
I squat yangaphambili 'squat yangaphambili'
Las squat Ihlala ikhona, masithethe ngemithambo esithetha ngayo, kuba ifuna ukugqibezela inkqubo esisiseko ngokugqwesa. Ibizwa njengenye yemithambo esisiseko yokusebenza. Ngayo ungonwabela amandla amaninzi kumzimba ongezantsi. Ngoku kufuneka uthathe indawo efanelekileyo kunye nokubheja ukomeleza umzimba ongezantsi kodwa kunye nenxalenye yamagxa kwaye kunjalo umva, oyena mntu uphambili namhlanje. Kodwa ngale mithambo uya kuyiphumeza ngokuqhwanyaza kweliso.
Ukutsala: Enye yezona zinto zilungileyo ze-barbell back
Sithetha ngebha kodwa kuyinyani ukuba khange sitsho ukuba kanjani. Ke ukutsalwa kuya kuba yinxalenye esisiseko yayo nayiphi na inkqubo exabisa ityuwa yayo. Njengoko usazi kakuhle, olu hlobo lwemivalo luya kulungiswa kwiindawo eziphakamileyo zodonga okanye iingcango, ukuze ufumane intuthuzelo enkulu. Ukwengeza kwi ukwazi ukubandakanya undoqo Kuyinyani ukuba uya kufumana amandla kwintshukumo nganye ukuze ufumane ukukhula ngakumbi komzimba kodwa ngakumbi komqolo. Yindlela egqibeleleyo yokukwazi ukulawula ubunzima bomzimba wakho. Ke kuyo yonke le nto, sele uyazi ukuba awuzukubashiya ecaleni kwaye kuya kufuneka ubazise kuzo zonke izinto ezifanelekileyo. Ngoku uyazi ezona ndlela zokuzivocavoca zibhetele ongaziphosanga.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » ZeMpilo » Ukuzivocavoca » Eyona mithambo mibi ibuyela umva